မည်သူမဆို P3D အဘို့ကောင်းသောမိုးလေဝသ addon သိ?
မေးခွန်း မည်သူမဆို P3D အဘို့ကောင်းသောမိုးလေဝသ addon သိ?
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #17 by andhar
မည်သူမဆို Prepar3D ဘို့အကောင်းတစ်ရာသီဥတု addon သည်အဘယ်သို့သိ ??
2 နှစ်ပေါင်း3ရက်သတ္တပတ်အကြာ #82 by Gh0stRider203
ငါ P3D ရှိသော်လည်းငါ့ system ကိုကြိုက်မှမထင်ထားဘူး .....
ငါတကယ်ကောင်းသောတွေ့ရှိသမျှရာခိုင်နှုန်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်အရာတစ်ခုမှာ, Rex ဖြစ်ပါတယ်။
ငါကအသုံးပြုဖူးပါဘူးနေစဉ်, ငါ FSRealWX အကြောင်းကောင်းသောအရာကြားရကြပြီ။ (နှင့်ငါကြိုက်တတ်တဲ့ပါသင်တန်းသောအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်)
နှစ်ဦးစလုံးသဟဇာတ P3D နေကြတယ်
1 months ago 10 တစ်နှစ် #509 by flightas1